မြန်မာ ပိုပြီးပွင့်လာရင် ထိုင်းပိုအကျိုးရှိမည် — မြန်မာဌာန
မြန်မာ ပိုပြီးပွင့်လာရင် ထိုင်းပိုအကျိုးရှိမည်
မကြာခင်က ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ ဥရောပ အာဆီယံ စီးပွားရေး စင်တာ ( EABC ) ဥက္ကဌ မစ္စတာ ဒင်နီယယ် က အခုလိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝန်းနဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ ပိုမိုပွင့်လင်းလာပြီး နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကို ပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိလာတာနဲ့ အမျှ ဥရောပ စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံဟာ မြန်မာကိုဝင်ဖို့ အဓိက ဂိတ်တံခါး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပွင့်လင်းရေး အစီအစဉ်တွေဟာ အလွန်အောင်မြင်နေပြီး ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်း တိုးတက် အောင်မြင်နေဦးမယ့် သဘောရှိပါတယ်။ ဥရောပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို မြန်မာပြည်သူတွေ အလွန်လိုအပ်နေပါတယ်။ အကြီးစား လုပ်ငန်းတွေတင်မက အသေးစားတွေပါ လိုအပ်နေတာပါ။ မြန်မာပြည်ပိုပြီး ပွင့်လာတာနဲ့အမျှ ထိုင်းနိုင်ငံဟာလည်း မြန်မာရဲ့ ဂိတ်တံခါး၀ အဖြစ်နဲ့ အကျိုးကျေးဇူး ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို မြန်မာနဲ့သဘာဝအားဖြင့်နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်နေတဲ့အတွက် ထိုင်းကတဆင့် မြန်မာပြည်တွင်းကို ဆက်သွယ် လုပ်ကိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ မစ္စတာဒင်နီယယ်က ပြောပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံဟာ တရုတ်ပြည်ပြီးရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒုတိယ အကြီးဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူု ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ အင်တာနက်၊ တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး စတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာ ပိုပြီးပွင့်အောင်လုပ်ဖို့ လိုအပ်နေတယ်လို့ မစ္စတာ ဒင်နီယယ် ကပြောပါတယ်။
ဥရောပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သဘာဝသယံဇာတဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွေ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး တည်ဆောက်မှု လုပ်ငန်းတွေ စတဲ့ လုပ်ငန်းမျိုးစုံအပေါ် စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်က စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ ဥရောပ အာဆီယံ စီးပွားရေးစင်တာ ( EABC ) ဟာ အာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာ လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ ဥရောပတိုက်သား လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် အခြေခံ သတင်းအချက်အလက်တွေ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရာမှာ ကြုံရနိုင်တဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ အစိုးရဌာနတွေနဲ့ ဆက်သွယ် ပြောဆိုညှိနှိုင်းရေးအတွက် ဝန်ဆောင်မှုတွေ စတဲ့ ပံ့ပိုးမှုတွေ ပေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
That's good news for everyone from Myanmar. It's time to change Myanmar. God bless u Myanmar.